Tirada dadka laga helay Covid-19 dalka Soomaaliya oo kor u dhaaftay labo kun oo ruux - Jowhar Somali news Leader
Home News Tirada dadka laga helay Covid-19 dalka Soomaaliya oo kor u dhaaftay labo...
Tirada dadka laga helay Covid-19 dalka Soomaaliya oo kor u dhaaftay labo kun oo ruux
Tirada dadka laga helay cudurka Covid-19 ee dalka Soomaaliya ayaa sare u dhaaftay labo kun uu ruux iyadoo dadka u dhinteyna ay boqol ruux ku dhow yihiin.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa warbixinada ay soo saarto Wasaarada Caafimaadka dowlada federalka waxaa laga arkayay hoos u dhac ku yimid dadka uu soo ridanayo cudurka Covid-19 ee caasimada dalka.
Warbixintii ugu dambeysay ee maanta soo baxdayna waxaa lagu sheegay in 24-kii saac ee la soo dhaafay la diiwaan geliyay 47 xaalado cusub oo COVID-19 ah, 1 bukaan uu geeriyooday halka 13 ruux oo kalana ay ka bogsadeen.
Bukaannada cusub 38 kamid waa rag 9-ka kalana waa haween. Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 2,023 xaaladood, 79 bukaan ayaa u geeriyooday cudurka, waxaana bogsootay 361 ruux.
Marwo Fowsiya Abiikar Nuur ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaad ayna dhaqan geliyaan tillaabooyinka lagu xakameynayo COVID-19, si guul looga gaaro dadaallada sare loogu qaadayo bed-qabka bulshada.